Dimmable कोरल रीफ एलईडी एक्वैरियम लाइट China Manufacturer
PH रैखिक सीरीज
विवरण:कोरल रीफ एल्यूमीनियम एक्वामियम लाइट,एलईडी रीफ लाइट एक्वामियम,कोरल रीफ एक्वैरियम लाइट एलईडी
Home > उत्पादनहरू > एलईडी एक्वैरियम लाइट > रिमोटको साथ एलईस माछा टैंक लाइट्स > Dimmable कोरल रीफ एलईडी एक्वैरियम लाइट
Dimmable कोरल रीफ एलईडी एक्वैरियम लाइट
USD 108.64 / Piece/Pieces
Dimmable पूर्ण स्पेक्ट्रम कोरल रीफ एलईडी एक्वैरियम लाइट
कस्ता रंगहरू माछा आकर्षित हुन्छन्?
त्यसोभए, यदि माछा मार्ने प्रकाश स्रोत पर्याप्त गहन छ भने अन्य हल्का रङहरू पनि आकर्षित हुनेछन्। उदाहरणको लागि, यसको गुणस्तर पहेंलो रंग संग सोडियम भाप लाइट माछा आकर्षित हुनेछ - यदि तीव्र हुन्छ।
एक माछा पकडने प्रकाश आकर्षक पनि सेतो प्रकाश हुन सक्छ किनभने यसको कुल ऊर्जा को एक भाग नीलो क्षेत्रमा हरियो छ।
D immableable कोरल रीफ एलईडी एक्वैरियम लाइट
1. कुनै प्रशंसकहरू, कुनै शोर, हल्का शरीर छैन।
2. समुद्री उर्जाको लागि सुरक्षित उच्च चमक।
3. CE RoHs SAA को साथ स्वीकृत
4. लामो काम गर्ने जीवन
रीफ र कोरल वृद्धिको लागि कुन हल्का उत्तम हो?
ती नेतृत्व रोशनीहरू डिजाइन गरिएका छन् ताकि तिनीहरू एक्वैरियममा उत्कृष्ट भिजुअल प्रभावहरू प्रदान गर्न सक्दछन्। केही रोशनी प्रणालीहरूमध्ये कुनै रिमोट कंट्रोलको साथ आउन तपाईले आफ्नो सोफेको सट्टा समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। यी उत्कृष्ट नयाँ प्राविधिक प्रगतिका साथ तपाई अब बनाउनुहुन्छ। अलिकति प्रभावकारी परिवर्तनहरू केवल बटुआको प्रेसको साथमा। उनीहरूले एक्क्वेरियम प्रकाशको नेतृत्व गरे पुरानो मेटल हाइडाइड र T5 फ्लोरोसेंट रोशनी भन्दा बढी प्रयोग गर्न सुरक्षित छन्। किनकि त्यहाँ कुनै धातु फलामहरू वा लाइट रोशनीहरूमा भेटघाट नगरी ग्यासहरू छन्। ल्यूक को कम गर्मी संग, एक्वैरियम रोशनी को नेतृत्व को अपेक्षा छ कि, कम गर्मी को उत्पादन संग, यो संभव छ कि तपाईं आफ्नो एक्यूरीम प्रकाश को बिजुली को खपत को कम से कम गर्न को लागि। तपाईं एक व्यापक को विकास लाई बढावा दिन को लागि हल्का प्रकाश मा छक्क हुनेछ पानीको बिरुवा र अन्य जीवहरु को विभिन्न प्रकार।
फ्रेड वाटर र नमक पानीको ट्यांक दुवैको लागि सही, निरन्तर परीक्षण र अपग्रेड गरेपछि विकसित, कोरल, चट्टान र बिरुवाको स्वस्थ वृद्धिको लागि स्वभाविक प्रकाश वातावरण बनाइन्छ।
दुई आयामहरू, दुई पावर कार्डहरू र दुई / बन्द स्विचहरू दुई च्यानलहरू अलग-अलग रूपमा नियन्त्रण गर्न। ड्युअलले अलग-अलग दुई च्यानलहरू नियन्त्रण गर्न स्विच गर्छ। दुबै आयाम मोडेलहरू तपाईंको मछली र जलीय बिरुवाहरूलाई नयाँ प्रकाशमा उकालो पार्न यसको प्रदर्शन बढ्दै / प्रकाश को तीव्रता।
यूभी नीलो, रातो, बैंगनी, सेतो र हरियो लाइट .ब्ल्यु यूभी प्रकाशले बिरुवाहरूको तल्लो तवरमा बिरोध बढाउँछ। दुर्व्यवहार प्रकाशलाई माछाको विकास को बाँझ र रक्षा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेतो र रातो लाइट कोरल चट्टानको वृद्धिको लागि आवश्यक छ। यी रोशनीहरूले तपाईंको एक्वैरियम स्वस्थ र सुन्दर बनाउनको लागि ठीकसँग मिल्ने छन्।
निर्मित-भित्र शान्त प्रशंसकहरू र हावामा शटरको प्रयोग गरी, सबै पक्षबाट प्रेरित ड्राफ्ट। शान्तसँग। उच्च वोल्टेजलाई रोक्न को लागी अनुकूलित अलगाव बिजुली आपूर्ति र नरम सुरुवात संरक्षण प्रविधि प्रयोग गर्नुहोस्।
165W एक्वैरियम एलईडी लाइटिंग
परिचालन भोल्टेज AC100-240VAC
पावर खपत 165 वाट
परिचालन आवृत्ति 50-60 हर्ट्ज
च्यानल एक भ्यालेलेट / इन्डिगो (420 एनएम), रयल ब्लू (450 एनएम), नीलो (470 एनएम)
च्यानल दुई हरित (520 एनएम), रातो (660nm), तटस्थ व्हाइट (6500 केके), कूल व्हाइट (12000 किलो)
डाईसन 16x8.5x2.4 इन्च
6.8 लिपि वजन
1) कोरल राइफल एल ाइटिंग, माछा टैंक प्रकाश, कोरल राइ ट्यांक प्रकाश।
2) एक्वैरियम प्रकाश, एक्वैरियम कला, एक्वैरियम पसल, एक्वैरियम केन्द्र।
3) माछा कटोरा प्रकाश, माछाको प्रकाश, तातो पानीको प्रकाश, नुनको पानीको प्रकाश।
सबै एलईडी एक्वैरियम रोशनीले सख्त गुणस्तर परीक्षा पास गरेका छन् र ढुवानी भन्दा पहिले सावधानीपूर्वक प्याक गरिएका छन्। यसकारण हाम्रो ग्राहकहरूले उच्च गुणस्तर लैंप पाउनेछन्, हामी प्रत्येक विवरणको महत्त्वलाई जोड्दछौं।
डिजाइनर र विनिर्माण एक्वैरियम रोशनीको नेतृत्वमा6वर्ष भन्दा अधिक अनुभव छ, ठोस गुणका लैंपहरू प्रदान गर्दछ र हाम्रो ग्राहकहरु बाट 30 देखि अधिक देशहरुमा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दै छन्।
हाम्रो नेतृत्व एक्वैरियम रोशनीहरूसँग पेशेवर चित्रकलाहरू छन् र सारा दिन र चन्द्र चक्रमा सूर्यको प्रकाश परिवर्तनहरू अनुकरण गर्छन्, रिफ, कोरल, माछा, आदिका लागि उत्तम लाइट वातावरण सिर्जना गर्दछ।
कुनै पनि समयमा हाम्रो फ्याक्ट्रीमा गएर राम्ररी स्वागत गर्न स्वागत छ र हामी तपाईंलाई उठाउनेछौं।
इन्डोर प्लांट बढ्दै जानको लागि 600W एलईडी वृद्धि लाइट अब सम्पर्क गर्नुहोस्
उच्च शक्ति 2000W एलईडी बिक्रीको लागि रोशनी अब सम्पर्क गर्नुहोस्
ऊर्ध्वाधर खेतीको लागि लाइट एक्वामियम बढाउनुहोस् अब सम्पर्क गर्नुहोस्
ग्रीनहाउस Aquaponics को लागि उच्च गुणवत्ता एलईडी GrowLights एलईडी अब सम्पर्क गर्नुहोस्
कोरल रीफ एल्यूमीनियम एक्वामियम लाइट एलईडी रीफ लाइट एक्वामियम कोरल रीफ एक्वैरियम लाइट एलईडी कोरल रीफ एल्यूमीनियम एक्वामियम रोशनी कोरल रीफ लेड एक्वामियम लाइट कोरल बढ्दो लागि एक्वामियम लाइट कोरल एसपीएस एलपीएस एक्वैरियम लाइट कोरल रीफ लेड एक्वामियम रोशनी